Myanmar Globe - Page2of 65 - News For You !
ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်အကြား နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများ အချိန်မရွေး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဟု AA က ပြည်သူသို့ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်အကြား နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများ အချိန်မရွေး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဟု AA က ပြည်သူသို့ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန် Western News- မေ ၁၆ ရက် ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်များအကြား နှစ်ဖက် တင်းမာမှုများမြင့်တက်နေသဖြင့် တိုက်ပွဲများ အချိန်မရွေး […]
ယ​နေ့ ​​ကျောင်းသားသစ္စာ​ဖောက်များ​ ကျောင်းတက်ကြပြီ
ယ​နေ့ ​​ကျောင်းသားသစ္စာ​ဖောက်များ​ ကျောင်းတက်ကြပြီ ယ​​နေ့ ကျွန်ုပ်တို့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်​တွင် စစ်​ကောင်စီကျွန်ပြုထား​သော ​​ကျောင်းကို တက်​ရောက်ကြတဲ့ ​ကျောင်းသားဦး​ရေ ၇၀၀​ ထက်မနည်း တက်​ရောက်လျက် ရှိသည်။ Chemistry/Biochemistry Major (၂၀၀)ဦး​၊ Physics Majorတွင် (၆၀)ဦး​​ကျော်၊ Bontany Major တွင် (၃၀၀)​ဦး​တို့ တက်​ရောက်နေကြသည်။ […]
ပူတင် ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရပြီး အပြင်းအထန် နာမကျန်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့လာ
ပူတင် ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရပြီး အပြင်းအထန် နာမကျန်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့လာ People’s Spring ရုရှား သမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်ဟာ ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရပြီး အပြင်းအထန် နာမကျန်း ဖြစ်နေကြောင်း ကောလာဟလတွေ ပျံ့နှံ့လာပါတယ်။ လူမှု ကွန်ရက် မီဒီယာတွေပေါ်မှာ အရင်ကတည်းက […]
၂၀၂၂ ခုနှစ် ‌မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အတွင်း မိုးကြီးရေလျှံသတိပြုရမည့် ဒေသများ ကို ထုတ်ပြောလာတဲ့ ဆရာမလေး စုစုစံ
၂၀၂၂ ခုနှစ် ‌မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အတွင်း မိုးကြီးရေလျှံသတိပြုရမည့် ဒေသများ ကို ထုတ်ပြောလာတဲ့ ဆရာမလေး စုစုစံ ၂၀၂၂ မေလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းအနီးတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး မေလ၂၀ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် မိုးကြီးနိုင်ပြီး ရေကြီးရေလျှံသတိပြုရန် မိုးလေဝသဆရာမလေး […]
နေတိုးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ဖို့ ဖင်လန် တရားဝင်ကြေညာ
နေတိုးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ဖို့ ဖင်လန် တရားဝင်ကြေညာ 15-May-2022 ဥရောပမြောက်ပိုင်းဒေသ ဖင်လန်နိုင်ငံ NATO မြောက်အတ္တလန္တိတ် စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ လျှောက်ထားမယ်လို့ ဖင်လန်သမ္မတနဲ့ အစိုးရက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဖင်လန်နိုင်ငံက သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဟယ်လ်ဆင်ကီမြို့တော်က သမ္မတအိမ်တော်မှာ ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပပြီး ကြေညာသွားတာပါ။ “ဖင်လန်လွှတ်တော်ကို တင်သွင်းကြားနာပြီးရင် NATO အဖွဲ့ဝင်လျှောက်လွှာ […]
တပ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သူနည်းနေသဖြင့် စစ်တပ်က အောက်ခြေစစ်သည်များကို ၎င်းတို့၏ သား၊ သမီးများ တပ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန် စည်းရုံးခိုင်းနေ
တပ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သူနည်းနေသဖြင့် စစ်တပ်က အောက်ခြေစစ်သည်များကို ၎င်းတို့၏ သား၊ သမီးများ တပ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန် စည်းရုံးခိုင်းနေ စစ်ကောင်စီတပ်က လတ်တလောကာလတွင် တပ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သူအလွန်နည်းပါးနေသည့်အတွက် ၄င်းတို့၏ လက်အောက်ခံ အောက်ခြေအခြားအဆင့်စစ်သည်များကို ၎င်းတို့၏ သား၊သမီးများ တပ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန် စည်းရုံးပြောဆိုခိုင်းနေကြောင်း တပ်တွင်းသတင်းရင်း မြစ်များထံက သိရသည်။ အောက်ခြေစစ်သားများ၏ သား၊သမီးများထဲမှ […]
ပူတင်ရဲ့ သတိပေးချက်ကို ဖင်လန် ပယ်ချ …ရုရှားဓါတ်ငွေ့လည်း ဂရုမစိုက်ဟုပြော
ပူတင်ရဲ့ သတိပေးချက်ကို ဖင်လန် ပယ်ချ …ရုရှားဓါတ်ငွေ့လည်း ဂရုမစိုက်ဟုပြော NATO အဖွဲ့ဝင်ဖို့ လျှောက်ထားမဲ့အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ ရုရှားသမ္မတ ပူတင်ရဲ့ ပြောဆိုမှုကို ဖင်လန်သမ္မတ Sauli Niinistö က ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံသမ္မတတွေ ဒီကနေ့ ဖုန်းနဲ့ စကားပြောရာမှာ ပူတင်က NATO ထဲမ၀င်ပဲ […]
လာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တကမ္ဘာလုံး မြင်တွေ့ရမယ့် အနီရောင်လ (မအလ ကျဆုံးမယ့် နိမိတ်ဆိုးလား…?)
လာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တကမ္ဘာလုံး မြင်တွေ့ရမယ့် အနီရောင်လ (မအလ ကျဆုံးမယ့် နိမိတ်ဆိုးလား…?) လာမယ့် တနင်္ဂနွေ နေ့မှာ လဟာ ကမ္ဘာဂြိုလ်နဲ့ တစ်တန်းတည်းနေရာသို့ဝင်ရောက်လာကာ လအပြည့်ကြတ်တာကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် အာကာသအေဂျင်စီ နာဆာ ကပြောကြားပါတယ်။ လဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အရိပ်ထဲကို […]
မအလ အဂတိမှုနဲ့ထောင်ချလိုက်တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်သုံးယောက်ရဲ့ ရိုးလွန်းတဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခု….
မအလ အဂတိမှုနဲ့ထောင်ချလိုက်တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်သုံးယောက်ရဲ့ ရိုးလွန်းတဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခု…. ခါးနာတတ်တဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုဆွေမျိုးသားချင်းတစ်ယောက်က….. ကားနောက်ခန်းမှာ ခင်းအိပ်ရတဲ့ လေထိုးမွေ့ယာလေးတစ်ခုဝယ်ပေးတယ် ၄၆၀၀၀ ပေးရတယ် ။သူ့ဦးရီး ဝန်ကြီးချုပ်က ၄၀၀၀၀ကျော်ရင်အဂတိနဲ့ငြိမှာစိုးလို့မယူမှာစိုးတော့ ၃၅၀၀၀ပေးရတယ်လို့ပြောပြီးပေးလိုက်တယ်။￼￼ အဲ့ဝန်ကြီးချုပ်က နေပြည်တော်အစည်းအဝေးသွားရင်း တခြား ဝကခ နှစ်ယောက် ကို အဲ့အခင်းမွေ့ယာလေး သွားကြွားတယ်။သူတို့လည်းလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ ၄၀၀၀၀ကျတယ်ပြောလိုက်ပြီး […]
#ခါကိဗ်မြို့တစ်ဝိုက်မှ_ရုရှားတပ်များဆုတ်ခွာဟုဆို #နှစ်မကုန်မီ_ရုရှားရှုံးမည်ဟု_ယူကရိန်းထောက်လှမ်းရေးပြော သီတင်းပတ်များစွာကြာ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ယူကရိန်း၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တစ်ဝိုက်မှ ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဆုတ်ခွာသွားကြောင်း ယူကရိန်းစစ်တပ်က ပြောကြားခဲ့ပြီး နှစ်မကုန်မီ ရုရှားတို့ အရေးနိမ့်နိုင်ကြောင်း ယူကရိန်း စစ်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲက သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ယူကရိန်းတပ်များကို ဖြိုခွင်းရန်နှင့် ခံတပ်များကို ဖျက်ဆီးရန်အတွက် အရှေ့ပိုင်း ဒွန်းညက်စ်ပြည်နယ်တွင် မော်တာများ၊ အမြောက်များနှင့် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ […]